China matatu-chikamu asynchronous mota yekukuya matombo nekucheka fekitori nevatengesi | Kutungamira
Matatu-chikamu asynchronous mota yekukuya matombo uye kucheka
Hunhu hweatatu-chikamu asynchronous mota yekukuya matombo uye kucheka: diki furemu, simba rakakwira, yakanaka yekuisa chisimbiso kuita, yakakwira dziviriro nhanho, yakaderera mota vibration, yakaderera ruzha, yakasimba uye hapana kufamba,
Smooth oparesheni, nezvimwe.
Iwo matatu-chikamu asynchronous mota dzematombo ekukuya uye kucheka zvinokandwa iron simbi dzakateedzana
◎ Chimiro Nha .: 71-132
Inoshanda Nzira: S1
Chikamu cheDziviriro. IP56
Kugadziridza uye kuvimbika itsika yangu, kuchinjika uye kuchinjika ndizvo zvakanaka zvedu. Isu tinovavarira kuve mumiriri we "Yakagadzirwa muChina" mune mota mota. Iyo kambani inonamatira kune bhizinesi uzivi hwe "kurapa nekutendeseka uye kuhwina nemhando". Kuti tigone kuzadzikisa zvido zvevatengesi vekunze nekune dzimwe nyika, tinoedza kuvaka zita re "Lijiu" uye kuita "Lijiu" inozivikanwa munyika uye pasirese. Shandisa kutendeseka kwedu nehungwaru kugadzira ramangwana riri nani rakabatana newe!
Pashure: Matatu-chikamu asynchronous mota yepombi pombi
Zvadaro: Mvura-yakanyorova matatu-chikamu asynchronous mota